Mawduucyada Roman Sulla on Martech Zone
Maqaallada by Roman Sulla
Roman wuxuu dunida ku soo galay xogta xogta dhijitaalka ah sanadkii 2013. Wuxuu ku guuleystey inuu kaqeyb qaato jihooyin badan: horumariye-dhamaadka hore, hogaaminta dhamaadka-dhamaadka, hogaaminta horumarka, milkiilaha wax soo saarka, iyo Madaxa Wax soosaarka. Sidan oo kale, wuxuu kaqaybqaatay soosaarida raadiyaha guji; Qalabka CRM ee hay'adaha; qalab lagu abaabulo laguna qiimeeyo hababka iibsiga warbaahinta; iyo adeegga guud ee websaydhka si loogu xiro iibsadayaasha iyo macaamiisha loona hubiyo isdhexgal wax ku ool ah oo dhexmara. Tan iyo 2019 wuu shaqeynayay JustControl.it
Arbacada, Oktoobar 7, 2020 Arbacada, Oktoobar 7, 2020 Roman Sulla
Suuqgeynta dhijitaalka ah waxaa horseed u ah baahi loo qabo habeyn ballaaran: ilaha xogta cusub, iskudhafyada cusub ee iskaashiga, heerarka weligood isbedelaya, xaaladaha casriga ah ee UA, iwm. Taasi waa sababta xirfadleyda guuleysta iyo kuwa hamiga leh ay ugu baahan yihiin marsiin shaqeynaysa si ay ula tacaalaan xaaladaha murugsan iyo sawirrada adag. Si kastaba ha noqotee, qalab badan oo jira ayaa wali bixiya qaab 'hal-cabbir-dhan ah' oo duugoobay. Qaab dhismeedkan koowaad, dhammaan